CEPJO oo xustay tacadigii 2012-ka loo geestay wariyaasha Soomaaliya (SAWIRRO) - calanka.com
CEPJO oo xustay tacadigii 2012-ka loo geestay wariyaasha Soomaaliya (SAWIRRO) (Calanka.com) - Posted at 10/12/2012 By Saadaq
Xaflad balaaran oo Wariyaal,masuuliyiin,Aqoonyahano,arday iyo wakiilka Hay’adda CPJ ee Bariga Afrika Tom Rhodes, ay ka soo qayb galeen ayna soo qaban qaabisay Xaruunta Nabadda iyo saxaafada ee loo soo gaabiyo (CEPJO) ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya.
Ugu Horayn waxaa xaflada daah furay Xoghayaha guud ee Xaruunta Nabadda iyo Saxaafada ee CEPJO Maxamed Xaaji Xasan Abuukar,Isago ka hadlay dhibaatooyinkii wariyaasha loo geestay sanadkan sii dhamaanaya ee 2012ka.
“Sanadka 2012 wuxuu ahaa sanad madaw oo soo maray suxufiyiinta soomaaliyeed,Aad baan ugu walwalsanahay nabadgalyada suxufiyiinta sidoo kale waxaan dareemaya in ay wili bartilaaamayd muquda aan u nahay kuwa ku caanbaxay daadinta dhiiga wariyaasha ” ayuu yiri Maxamed Xaaji Xasan oo ah ah Xoghayaha guud ee CEPJO.
Waxaa uu sidoo kale uu sheegay in Xarunta Nabadda iyo saxaafadda ay soo dhawaynayso Talaabadii dhawaan xukuumada soomaaliya ay ku balan qaaday in lala xisaabtami doono kuwa dhibaatada iyo dabargoynta ku haya wariyaasah soomaaliyeed.
Tom Rhodes oo ah wakiilka CPJ ee Bariga Afrika oo isaga xafladaas ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay in ay aad u uga xunyihiin dhibaatooyinka haysta wariyaasha somaaliyeed.
“Dilka suxufiinta waa ‘dambi aan loo dulqaadan karin waana arin aan si deg deg ah caalamaka u waydsanayo in ay wax ka qabtaan” ayuu yiri Mr Tom.
Tom Rhodes ayaa sheegay CPJ iyo CEPJO ay yeelan doonaan wadashaqayn balaaran oo ku aadan sidii siwada jir ah logu istaagi lahaa in si muuqata wax loga qabto tacadiga loo gaysanayo wariyaasha islamarkana loo heli lahaa hannan cadaalad ah oo arinkaas logu xalin karo.
Dadkii ka hadlay waxaa kamid ah,Qaasim Maxamed oo ah masuul ka tirsnn CEPJO goobtana ka balan qaaday in CEPJO ay qorshaynaso wariyaasha soo qaxay ee kenya ku sugan in ay u samayso guri badbaada ah oo wariyaasha la dajin doono iyo xaruun Media Center ah taasi oo ka qayb qaadan karta yaraynta dhibaatooyinka wariyaasha soomaaliyeed ku haysata dalka kenya.
Xasan kuuriye oo ah rug caddaa saxaafadeed ,oo goobta xaflada ka hadlay ayaa ugu baaqay wariyaasah in aysan baqdin dartayd u joojinin howsha qaran ee ay umadooda u hayaan.
Sidoo kale gudoomiye ururka dhalinyarada suxfiyiinta Nairobi maxamed Nuur fanax ayaa ka mid aha masuuliyiintii goobtaas ka hadashay waxaana uu bogadaiyay balanqaadyada ay samaysay hay’ada CEPJO
Gudoomiye Ku xigeenka Xaruunta Nabadda iyo saxaafada waris Maxamed ayaa cod tiiraanyo leh ku dalbatay in la joojiyo dilka wariyaasha loo geesanayo islamarkaana aysan wariyaasha maanta mudnayn in la beegsado.
Intii ay socotay Xafladaasi balaaran oo ay soo qaban qaabisay xarunta Nabada iyo saxaafafa ee (CEPJO) ayaa waxaa lagu soo gandhigay Book ay CEPJO ka diyaariysay dacdiyeenka wasriyaasha loo geestay sanadkii 2012, Ruwaayad ka tarjumaysay dhibaatooyinka wariyasha loo geeto, iyo daruufaha ku hareeraysan sufufiyiinta taasi oo siwayn ula dhaceen ka qayab galanyaashii.
gabagabada munaasabdaasi oo CEPJO ay ku xusaysay Tacdiyiinta wariyaasha ugna magacdartay sanadkan sii dhamaanaya 2012 in uu yahay sanadkii guduudnaa ama Sanadkii Casaa ( The Read Year) ayaa waxaa shahaadoyin lagu gudoonsiyay arday ay xaruunta CEPJO u so xirtay siminaar sedex maalmood ah soconayay kaasi oo loo qabtay 12 arday oo Nairobi ka barata saxaafada.
Gudoomiyaha CEPJO Maaxiye Cabdi Nuur,iyo madaxa mashaariicda Xaruunta nabadda iyo saxaafda Burhaan faarah ayaa shahaada gudoonsiinayay ardaya iyadoo ay wehliyeen qaar kamid ah marti sharafta ka qayb gashay xafldaasi.